Kismaayo News » Puntland: Taliye Guulaystay!
Puntland: Taliye Guulaystay!
Kn: Taliyaha Ciidanka Daraaawiishta Puntland ma looga abaal celin doonaa Masuuliyadii uu ka soo baxay?
Waxay ahayd goor fiid cadde ah, waxaanu ka soo gudubnay soohdinta u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland ee Gobolka Sool,
gaadiid badan ayaa ku soo jeeday dhinaca Magaalada Garoowe iyo gobollada kale ee Puntland, kuwaasoo ka soo gooshay dhinaca Magaalooyinka Somaliland ee Hargeysa ilaa Laascaanood oo Bariga ugu xigta.
Markii aan ka dhaqaaqay Kaantaroolka Magaalada Laascaanood ee dhanka Bariga, waxa laabtayda ku soo dhacayay fariimo kala duwan oo la xidhiidha natiijada safar aan ugu soo kicitimay Magaalada Garoowe ee xarunta Dawladda Puntland ,haasoo 12 saacadood ka dib xiligaasi Doorasho Madaxtinimo ka dhacaysay.
Safarkan ayaa ahaa mid noloshayda ku cusub, isla markaana masaafo ahaan Dhulka aan isaga gudbay ahaa mid aad u kala fog, hadana wakhti gaaban igu qaatay, taasoo ay ugu wacantahay xawaaraha socodka gaadhiga aan la socday oo ahaa mid aad sareeyay(140/km).
Wakhtiga ayaa nagu ahaa shayga ugu qaalisan maalintaasi aniga, rakaabka kale ee gaadhiga ila saarnaa iyo Darawalkaba, waayo waxaanu ka ordaynay habeen dhax iyo inaanu soo geli wayno gudaha Magaalada Garoowe ilaa dhamaadka Doorashada.
Yaxye waa wadaha gaadhiga aanu Hargeysa kaga soo safrnay ee Garoowe I keenay, waxaanu tan iyo markii aanu Hargeysa ka soo baxnay 11-kii duhurnimo ee 7 Janaury oo ahayd maalin Talaada ah uu ku tabaniyayey sidii uu nabad qab noogu keeni lahaa Magaalada Garoowe maalinta doorashada ka hor, inkasta oo aanu taasi ku guulaysan dedaal kasta oo uu sameeyay.
4-tii galabnimo ee isla maalintaasi, ayaa guud ahaanba la xadiiday isu socodka Magaalooyinka waaweyn ee Puntland, waxaana maalmo ka hor Ideecadaha laga sheegay in afarta Galabnimo ee Maalin ka hor subaxa Doorashada la joojinayo soo gelintaanka Magaalada Caasimadda ah ee Garoowe.
Go’aankan ayaa ahaa mid geesinimo leh, balse fulintiisu gaashaan adag iyo gacan bir ah u baahnaa.
Guud ahaanba waxa heegan buuxa la geliyay Ciidamada kala gedisan ee Puntland, kuwaasoo guntiga dhiisha iskaga dhigay sidii ay gacan buuxda ugu qaban lahaayeen amaanka Gobolka oo dhan, isla markaana uga soo bixi lahaayeen waajibaadka dastuuriga ah ee saaran iyo masuuliyadda amniga dalka ee lagu wareejiyay Taliyaha Ciidanka Daraawiishta General Siciid Maxamed Xirsi (Siciid Dheere).
Boqolaal Gaadiid ah iyo dad musaafiriin ah ayaa galabtaasi lagu hakiyay Kaantaroolo ka fog-fog Magaalada Garoowe, gaar ahaan kuwa looga soo galo Magaalooyinka Laascaanood oo Baabuurta iyo dadka lagu joojiyay Magaalada Tuko-raq oo ilaa 70KM u jirta Garoowe iyo Gaalkacayo iyo Boosaaso ka imanaya oo iyagana lagu hakiyay meel kala duwan.
Laga bilaabo afartii galabnimo ee salaasada wax gaadhi ahi muu soo gelin Garoowe,kamana bixin, ilaa maalintii Arbacadda ee 8 Bisha markii la soo gunnaanaday Doorashada, lagana buskaday xumadii iyo xaraaradii loolanka doorashada oo dadka reer Puntland boqolkiiba todobaatan iyo dheeraad ay wel-wel ka qabeen natiijada laga dhaxli doono.
Rabshaddo kooban oo Magaaladda ka dhacay markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada Madaxweynaha oo ay dadku si toosa ugala socdeen shaashadaha, ayaa sii laba jibaaray werwer iyo walaac muddo dheer laabta Mujtamaca Gobolka fadhiyay .
“Walee magaaladaan arkayay doorashada ka hor inay wax ka dhacayaan oo amaanku faraha ka baxayo waan filayay”sidaasi waxa ii sheegay Cabdiraxmaan oo ah Odeyaasha Magaalada Garoowe.
Kaasoo intii aan la guddo gelin wareega labaad ee Doorashada, taasoo lagu dooranayay madaxweyne ku-xigeenka Taleefoon iigu xaqiijiyay Dhimashada laba qof oo ku naf waayay rasaas Ciidanku ku kala kaxeeyay dadweyne gadoodsan oo ku soo buuqay agagaarka aqalka Baarlamanka oo ay coddeyntu ka socotay.
Hase ahaatee rabshadahaasi oo aan wakhti dheer sii socon iyo dhimashada labadaa ruux mooyaane, wax kale kamay dhicin Magaalada Garoowe iyo guud ahaanba Gobollada kale ee dalka, waxaana saacado ka dib deegaamo badan oo dalka ah ka bilaamay dabaal degyo iyo dibad baxyo lagu taageerayo madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa.
Doorashada ka dib warar isdhaafdhaafayay
Nabad-gelyada ayaa ahayd mid sideedii u sugan, waxaana jiray foojignaan fara badan oo bulshada iyo laamaha amaanku ku fooganaayeen, taasoo Idamka ALLE ka sekow gaashaan u ahayd cadow kasta oo gudaha iyo dibadda guluf kaga soo qaada dalka.
Inkasta oo aanay dadka reer Puntland u cusbayn doorasho madaxweyne cusub lagu doorto, isla markaana hore ay isbedelo hogaamineed oo noocan ahi uga dhaceen, hadana tani waxay ahayd mid ka saxmad iyo wel-wel badnayd kuwii hore, sida ay ii sheegeen dadweyneha qaarkood.
Sababtooy tahay cabsida doorashooyinku waxay berigii hore ku koobnaayeen muranka musharixiinta ku loolama oo ku qanci waayay natiijada, laakiinse lagama baqi jirin weeraro dibadda laga soo abaabulo, falal argagixisanimo iyo kooxaha isqarxiya toona, halka doorashada sanadkan walaaca ugu badan ee amniga lagu tilmaami karo falal argagixiso in dalka laga fuliyo.
Qabsoomidii doorashada ilaa laga soo gaaray xil la kala wareegida Madaxweyneyaasha isbedelay, jawiga magaalada Garoowe wuxuu ahaa mid foojignaan iyo jabaq dhawr ka muuqday dadka dhexdiisa iyo laamaha nabad-gelyada, waxaanay ciidamadu ahaayeen kuwa loogu hadal haynta badan yahay, islamarkaana shaqada ugu badan hayay.
Waxa jiray warar laysla dhex marayay maalmihii la soo dhaafay oo sheegayay in Ciidamadii Madaxweyne Faroole la shaqaynayay, ay damacsanyihiin inay la goostaan hubkii iyo Gaadiidkii gacanta ugu jira, waxaana sheekadaasi intii ay socotay la weeraray Madaxtooyada Magaalada Boosaaso ay koox hubaysani isku dayeen inay bililiqaystaan, balse laga difaacay.
Guux kasta oo arintaasi la xidhiidhay waxba kama suurto gelin, mana jiro wax iska bedelay nidaamka shaqo ee ciidanka Garoowe ku sugan, kuwaasoo la dareemayo inay shaqada sii kordhiyeen intii doorashada ka dambeysay, isla markaana xiliga kala guurka culays badani fuulay.
Yaa iska leh guusha sugida amniga?
La wareegida masuuliyada amniga Puntland waxa dusha ku qaatay oo ay Musharixiintii tartamay isku waafaqeen taliyaha Ciidanka Daraawiishta Gen, Siciid dheere, kaasoo aan ahayn nin shaqada ku cusub, balse muddo dheer ka mid ahaa hogaanka Ciidamada Gobolka.
Masuuliyadda uu qaaday sarkaalkani ayaa ahayd mid aad u culus oo aanay Madaxweyneyaal badan oo afrikaanka ahi ka soo bixi Karin, hase ahaatee waxa iska cad oo aan isweydiin u baahnayn in Taliye Siciid dheere kalsooni buuxda iyo karti ku waajahay hawsha loo igmaday, isla markaana uu haysto ciidamo daacad u ah fulinta awaamiirtiisa iyo difaaca dalkooda.
Taliye Siciid Dheere, Waxa la odhan karaa waa ninka maanta ugu nasiibka badan dadka reer Puntland ilaa madaxweynaha xilka ku guulaystay, isla markaana ugu farxadda badan, maadaama uu Ilaahay ku asturay shaqada uu qabtay, kana guulaystay dhibaato kasta oo looga baqo qabay Puntland inay soo waajahaan maalmaha doorashada.
Tan ayaa ah arrin ay si weyn ula dhaceen daneeyayaasha dawladnimada Puntland ee Caalamku, khaasatan u qaybsanaha Qaramada Midoobay ee Somalia oo intii aan doorashadu dhicin amaan balaadhan u jeediyay, kuna booriyay musharixiintu inay la shaqeeyaan.
Waxa kale oo hubaal ah inuu kalsooni badan iyo sumcad ka mutaystay shacbiga reer Puntland iyo Siyaasiyiintii loomay labadaba, taasoo aan odhan karno waa mid uu xaq u leeyahay in looga mahad celiyo, isla markaana loogu bedelo Bilad geesi qaran oo Golle lagu guddoonsiiyo iyo abaal marin Caalamiya.
Taasi waxay dhiiri gelin u noqonaysaa isaga iyo kumanaanka kale ee Dirayska iyo dabka u sita difaaca dalkooda ee uu madaxda u yahay, waxaanay suurto gelinaysaa inuu masuulkani u dhabar adaygo shaqooyin kale oo arrimahan aan ka soo hadalnay ka culus, kuna daydaan Saraakiisha ka hoosaysa ee bari ka maalin shaqada kala wareegaya.
Isku soo wada duuboo Taliyaha Ciidanka Daraawiishta Puntland Gen, Siciid Maxamed Xirsi, waxa lagu sifeyn karaa madaxweyne 24 saacadood talada hayay oo ka wax qabad iyo horumar balaadhan hogaamiyeyaal sanado badan talinayay.
Wariye: Sulaiman Cabdi Cali (Kalshaale)
Gobanimonews Chief Editor